Faston: ihe niile ị chọrọ ịma gbasara ihe ndị a | Akụrụngwa n'efu
N’ezie, unu anụbeghị banyere Jehova ngwa ngwa, ma ọ bụrụ na ị rụọ ọrụ oru elektrọnikị ị hụla ma jiri ya karịa otu oge. Ha bụ nnukwu amaghi, ebe ọ bụ na ọ bụghị ihe dị mkpa, ị nwere ike ịrụ ọrụ Mee N'onwe Gị na-enweghị ya ma ọ gaghị emetụta ọrụ ahụ, ọ bụ ezie na iji ya eme ihe ka akwadoro maka nkasi obi na iji nọgide na-enwe "ahụike" nke eriri gị.
N'ime ntuziaka a, ị ga-amụta Ihe niile ị kwesịrị ịma banyere nke a electronic akụrụngwa, site na ihe ha bụ, otu esi eji ha, otu ha si jikọọ, na ngwaọrụ ndị ị nwere n'aka gị iji rụọ ọrụ na ha ...
1 Kedu ihe bụ faston
2 Esi mee ya
3 Kedu ihe m kwesịrị ịtụle?
3.1 Ebe ịzụta ngwa ngwa
4 Ngwaọrụ iji rụọ ọrụ na ha
Kedu ihe bụ faston
Un ngwa ngwa, ọnụ ma ọ bụ ọnụDịka ị na-ahọrọ ịkpọ ya, ọ bụ ihe ọ bụla karịa njikọta iji gbakwunye na nkwụsị nke eriri eletrik iji nwee ike jikọọ ya na ngwaọrụ ma ọ bụ netwọk ọzọ. Nchupu a nwere ike ibu onye nduzi na njedebe nke eriri ma obu nwekwa ihe ozo ndi ozo dika nkedo maka ijigide ya, wdg.
Enwere ike idozi ihe dị iche iche iji wepụta katalọgụ ụdị faston na-adị n'ahịa:
N'ihi na splices
Ndi nwanyi Waya
Njikọ De / ngwa ngwa
Ntutu ntutu ma ọ bụ ire
N'ezie, ị ga-ahụ akụrụngwa ma nwoke ma nwanyi, dị ka ịkwesịrị ịkwado njikọ ahụ.
Na mgbakwunye na nke ahụ, inwere n'ime ụlọ ọrụ usoro aha iji depụta ngwa ndị a, dịka usoro nke eji tinye ha na ahia ndi America:
312 usoro: ha bụ njikọ nwoke 7.92 mm.
250 usoro: nakwa ụdị nwoke na akụkụ nke 6.35 mm.
205 usoro: na nke a ha bụ ụdị nwoke na 5.21 mm.
187 usoro: akụkụ ruo 4.75mm na ụdị nwoke.
125 usoro: Nwoke nwoke 3.18 mm.
110 usoro: Nwoke nwoke 2.79 mm.
N'ime usoro isiokwu ọ bụla enwerekwa ọdịiche dị n'okpuru AWG aha (American Wire Gauge) nke na-ekpebi akụkụ nke dayameta dịka agba nke plastik na-eso ha.
Esi mee ya
Dị ka ụdị nke ngwa ngwa, ma ọ bụ ọnụ, ojiji nwere ike ịdị iche iche dịtụ. Fọdụ na-agụnye grimaces ị nwere ike ịdakwasị ụfọdụ njikọ iji mee njikọ eletriki. Ndị ọzọ na-achọ maka itinye, wdg.
Enwekwara ụfọdụ njikọ ụdị faston ndị nwa oge, nke ahụ bụ, enwere ike iwepụ ha ngwa ngwa mgbe achọrọ ha. Ndị a bụ ndị a na-ahụkarị na sekit na sekit na-agbasasịkarị ugboro ugboro ma ọ bụ na akụkụ ndị dị mkpa iji dochie anya oge.
Ndị ọzọ bụ ndị na-adịgide adịgide ụdị, ebe ọ bụ na ha na-welded na-adịgide adịgide mmasị. Otú ọ dị, ọ bụghị a ịgbado ọkụ enweghị ike ịgbagha agbagha, ebe ọ bụ na enwere ike iji iron soldering wepụ njikọ wee dochie mpaghara ahụ emetụtara. Ma nke a bụ ọtụtụ cumbersome ...
Kedu ihe m kwesịrị ịtụle?
E nwere ọtụtụ ụdị na ndị nrụpụta ngwa ngwa na ahịa. Nke ahụ na - eme ka o sie ike ịhọrọ mgbe ụfọdụ ma ọ bụ na ị ga - ahọrọ nke mbụ ịchọrọ. Mana ị kwesịrị iburu n'uche ụfọdụ ntụle iji họrọ nke kacha mma maka mkpa gị. Na nke ahụ na-eme n'ịbịa n'àgwà dịka:
Ogo nke ihe. Fọdụ na-agbasi ike karịa ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị dị ọnụ ala nwere ike ịdị njọ nke na ha na-agbaji n'oge ịmegharị na crimper. Ihe kachasị mma bụ na ị na-ahọrọ ndị ejiri ọla kọpa pụrụ iche na plastic dị elu. Ọla kọpa na PVC dịkwa mma, ọkachasị maka ngwa elektrọnik.
Akụkụ. Nke a ga-adabere na ojiji ị ga-enye ya na ngwa ọrụ ị ga-eji rụọ ọrụ. Ejila ngwa ngwa dị ukwuu maka eriri ndị dị mkpa, ma ọ bụ na ntụgharị, ma ọ bụ na ị ga-enwe nsogbu. Dịka ọmụmaatụ, na ngwa ngwa nke na-adịghị ejide ike nke ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ nnukwu ngwa ngwa nke na-anọ jụụ na eriri ma anaghị eme ezigbo kọntaktị.
Tipo. Nke a bukwara nke gi nke ga adabere na nkpa gi Nwere ike ịchọrọ ngwa ngwa njikọ dị mfe ma ọ bụrụ na ị ga-eji ya maka ngwa nke ị ga-ejikọ ma kwụpụ oge ụfọdụ, ma ọ bụ na ịchọrọ otu nke ga-enye gị ohere iji ịghasa iji dozie ya na nke anaghị apụ na ngwa mkpanaka, na vaibret, wdg.
Ebe ịzụta ngwa ngwa
Faston bu oke ọnụ ala na ị nwere ike ịzụta n'ọtụtụ ụlọ ahịa pụrụ iche. N'ahịa ị nwere ụdị dịgasị iche iche nke ndị a maka ọrụ gị, dị ka:
Kit nke mpempe 900 nke ụdị na agba dị iche iche
Kit nke 330 dị iche iche na agba agba
Kit nke ụdị ngwa ngwa + crimper + plọg
Akpa na ọtụtụ nwoke na nwanyị ngwa ngwa ngwa
Iberibe 720 nwanyi na nwoke nwere uwe mkpuchi
Daashi: 12 size polyolefin okpomọkụ Ada Ada tubing agwaogwa
Ngwaọrụ iji rụọ ọrụ na ha
Iji nwee ike idozi ngwa ngwa ngwa ngwa na eriri gị, nke kachasị mma bụ na ị naghị eji ngwaọrụ ndị ọzọ na-adịghị mma dịka ngwa mkpaji, ngwa mkpa, wdg, ebe ị nwere ike ịkwụsị mmewere ma ọ bụ mezie nke ọma. Kwesịrị, ị kwesịrị ị na-eji crimpers na ị ga-ahụ n'ahịa na nke ahụ na-enyekwa gị ohere idozi ngwa ngwa na eriri gị na ụzọ ndị ọkachamara.
Dị ka ihe atụ, i nwere ụfọdụ ndị i nwere ọnụ ala ngwaọrụ dị ka:
JBM crimper maka ọnụ ala ngwa ngwa ọnụ
Presch nrụgide ọkachamara crimper
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Ihe eletrọniki » Faston: ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe ndị a
Walkman nwere Raspberry Pi na floppy diski maka ịchekwa egwu